ထူးခွားတဲ့ မျောကြှနျးမွို့ မျောလမွိုငျကြှနျးမွို့ နှားသတျခှငျ့မရှိတဲ့မွို့အကွောငျး – Youth Bar
ထူးခွားတဲ့ မျောကြှနျးမွို့ မျောလမွိုငျကြှနျးမွို့ နှားသတျခှငျ့မရှိတဲ့မွို့အကွောငျး
ထူးခွားတဲ့ မျောကြှနျးမွို့ မျောလမွိုငျကြှနျးမွို့ နှားသတျခှငျ့မရှိတဲ့မွို့
အမဲလိုငျစငျကို မွို့နလေူတှကေ ငှစေုပွီး နှဈတိုငျး လလေံနိုငျအောငျဆှဲပွီး ဘယျသူ့ကိုမှ သတျခှငျ့မပေးပဲ သိမျးထားတာ နှဈပေါငျးမနညျးတော့ဘူး။ အခုနောကျပိုငျးတော့ အမဲပျေါလို့ သတငျးပေးရငျ သတငျးပေးတဲ့သူကို ဆုငှပေါပေးတယျတဲ့။
နှဈပတျလညျ အာရုံဆှမျးလောငျးတဲ့မွို့ မွို့မှာရှိတဲ့ တောစြေးတနျး (ဟငျးသီးဟငျးရှကျတနျး) ဟငျးခကျြစရာတှရေောငျးတဲ့ စြေးတနျး ၃ခု ၄ခုလောကျမှာမှ မွို့လယျမှာရှိတဲ့ တောစြေးတနျးမှာ အလှူခံမဏ်ဍက နှဈပတျလညျရှိပါတယျ။
သူ့ရကျနဲ့သူ အလှူခံရတဲ့ငှကေို နောကျအပတျ အဲ့ဒီရကျမှာ အာရုံဆှမျးခကျြလောငျးပါတယျ။ အလှူခံမဏ်ဍက တနရောထဲ။ ဆှမျးခကျြတဲ့နရောကလညျး တခုထဲပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ အဖှဲ့ ရဖှဲ့။
မနကျ ၄နာရီလောကျဆို မွို့ပျေါကြောငျးပေါငျး ၄ဝကြျောက သံဃာတှကေ မွို့ပတျပွီး ဆှမျးတနျးကွီးတှကေ ဟိုဖကျကလာလိုကျ ဒီဖကျကလာလိုကျနဲ့ ထှကျလာကွတာ တကယျ့ကို ပီတိဖွဈစရာပါ။
ဆှမျးတနျး ၂တနျးမကျြနှာခွငျးဆိုငျလညျး သူ့လမျးကွောငျးနဲ့သူ ဖွတျနကွေတာပဲလေ။ အဲ့ဒါက မျောကြှနျးမွို့လေးကို ကပျဆိုးတှမေကရြောကျစတေဲ့ အကွောငျးရငျးထငျတာပဲနျော။
အင်ျဂလိပျခတျေက စနဈတကမြွို့တညျခဲ့တယျလို့ ပွောကွတာပဲလေ။ ဝလမျးကနေ ၁၅လမျးထိ အရှနေဲ့အနောကျ A B C D လမျး တောငျနဲ့မွောကျတနျးနတေဲ့မွို့ပေါ့။ အခုတော့ မွို့ခြဲ့လာတာ မွို့ထိပျတခု တခုရောကျဖို့ မနညျးသှားနရေတယျ။
သီတငျးကြှတျလပွညျ့နေ့ ကြျော (1)ရကျတိုငျး တာဝတိံသာဘုရားဆငျးပှဲ ရှိတယျ။ အခု သီတငျးကြှတျဆို 88ကွိမျမွောကျပေါ့။ မျောကြှနျးသူ မျောကြှနျးသားတိုငျး ဘုရားဆငျးပှဲ ကိုပွနျခငျြကွတယျလေ။
ဘယျလောကျစညျ ကားသလဲဆို မီးတောငျတှလေညျး ဖောကျပွတယျ။ မွတျစှာဘုရားရဲ့ လကျဝဲရံ ရှငျမဟာမောက်ကလနျ မဟာထရျေက မီးတောငျထဲကနေ လထေဲမှာ စနျြပြံသှားပွီး မွတျစှာဘုရားကို နတျပွညျကနေ ပွနျသှားပငျ့ပုံကို Steelကွိုး ရဈလုံးအကူနဲ့ပေါ့။ စြာနျပြံပွတာလေ။
ပွီး နတျပွညျအထပျထပျ တထပျတိုငျးမှာ အသီအဆို အကတှနေဲ့ နတျသား နတျသမီးတှနေဲ့ ခွံရံပွီး လူ့ပွညျကို ပွနျဆငျးလာပါတယျ။ နောကျရကျ တမွို့လှညျ့ အပူဇျောခံပါတယျ။ တာဝတိနျသာမွတျစှာဘုရားက တရုပျကပွားဗုဒ်ဓဘာသာအသငျးကွီးက တညျထားကိုးကှယျခဲ့တဲ့ဘုရားကွီးပါ။
မျောကြှနျးအပိုငျရှာသူကွီး 108ဦးပိုငျ နှငျ့ အနီးအနားမွို့မြားမှ အကုနျလာကွသညျ။ မွို့ထဲမှာ ညနေ၆နာရီ ကြျောလာတာနဲ့ လမျးတှမှောလူတှအေပွညျ့ ရာဇူဒိုငျမွဈ နဲ့ တုံးလှဲခြောငျး ထဲလှသေင်ျဘော ဆိုကျစရာမကနျြအောငျပွညျ့နတော လမျးတှေ မှာ လမျး လြှောကျစရာမလိုပဲလူအုပျထဲညပျပွီးရှနေ့တောပါ။
တာဝတိံသာကနေ မွတျစှာဘုရားပွနျဆငျးတဲ့နမှေ့ာပဲ ကရငျရှာလေးဖွဈတဲ့ မရမျးခြောငျရှာလေးမှာ မွဈထဲလှတှေလှေျောရငျး ရပေကျပှဲကလညျး အလှနျပြျောစရာကောငျးပါတယျ။ ရိုးသားတဲ့ရှာကလှတှေေ နဲ့ speed boat တှရေောထှေးနတောပါ။ ရိုးသားတဲ့ ရှာဓလေ့ ရှာသား သူတှပေါ။
၃။ ခွင်ျသေ ၂ကောငျဘုရား
1. အခမဲ့ အောကျစီဂငျြ
2. အခမဲ့ သှေးလှူအဖှဲ့
3. အခမဲ့ ဆေးခနျး
4. အခမဲ့ လူနာတငျယာဉျ
6. ဇိဝိတ သားသတျလိုငျ စငျ အလှူ
7. အခမဲ့ စာသငျကြောငျး
8. ကိုယျထူကိုယျထ မီးသတျအဖှဲ့
9.သကျကွီးစောငျ့ရှောကျ ဘိုးဘှားရိပျသာ (နောငျရေးစိတျအေးရအောငျ မျောကြှနျးမွို့မှာ ပွနျနကွေပါ)
အငျမတနျလှပတဲ့ ရပေတျလညျ မွဈကွီးမြားဝိုငျးရံထားတဲ့ ဧရာဝတီတိုငျးက ခဈြစဖှယျမွို့ငယျလေး။ ဖျောရှပွေီး တမွို့လုံက အမြိုးတှလေိုနကွေတဲ့မွို့လေးပါ။ ကြှနျတျောတို့ငယျငယျကပွောတာ။ အခုမဟုတျတော့ဘူး။
ရနျကုနျကနေ နခွေငျးပွနျလညျပတျလို့ကောငျးတဲ့အကှာအဝေးပါ။ လှိုငျသာယာကနေ ၃နာရီမောငျးရမညျ လမျးကောငျးသညျ။
သီတငျးကြှတျ လပွညျ့နေ့ အကွောငျး
၂၀၁၇ ခုနှဈ အောကျတိုဘာလ (၅) ရကျနဟေ့ာ သီတငျးကြှတျလပွညျ့ (အဘိဓမ်မာ အခါတျောနေ့) ဖွဈပါတယျ။ လမငျးကွီးဟာ နေ နဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျ (ကမ်ဘာတဘကျခွမျး) မှာ နအေလငျးရောငျ ကရြောကျမှုကွောငျ့ အပွညျ့အဝ လငျးလကျလို့ နမှောဖွဈပါတယျ။
သီတငျးကြှတျလကို ပုဂံခတျေကြောကျစာမြားမှာ “သန်တူလ (အသံထှကျ- သနျတူလ)” လို့ ရေးသားကွပါတယျ။ “သနျ” ဆိုသညျမှာ “ကောကျပငျ” ဟု အဓိပ်ပါယျရပွီး.. “တူ” ဆိုသညျမှာ “ထောငျမတျသညျ၊ ပေါကျပှားသညျ” လို့ အဓိပ်ပါယျရပါတယျ။
ကောကျပငျမြား ထောငျမတျပေါကျပှားသောကာလ လို့ အဓိပ်ပါယျဖှငျ့ဆို နိုငျပါတယျ။ အငျးဝခတျေ စာပမြေားတှငျ “သီတငျးကြှတျ” လို့ စတငျ သုံးစှဲခဲကွပွီး “သီတငျး” ဆိုသညျမှာ “နထေိုငျခွငျး” လို့ အဓိပ်ပါယျရပါတယျ။
ဝါတှငျး ၃ လ ကာလပါတျလုံး သီတငျးသုံး နထေိုငျခွငျးမှ ကြှတျလှတျသော အခြိနျအခါ ဖွဈပါတယျ။ ရာသီပနျးမှာ ကွာဖွူပနျး ( Nymphaea Lotus ) ဖွဈပါတယျ။
ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျမြားအတှကျကတော့.. မွတျစှာဘုရားရှငျဟာ ဝါတှငျး (၃) လ လုံး တာဝတိံသာ နတျပွညျမှာ မယျတျော သန်တုဿိ နတျသားအပါအဝငျ နတျ၊ ဗွဟ်မာတို့အား အဘိဓမ်မာတရား ဟောကွားပွီး လူ့ပွညျသို့ ပွနျလညျ ဆငျးသကျသော အခြိနျအခါ ဖွဈသောကွောငျ့ “အဘိဓမ်မာ အခါတျောနေ့” လို့ သတျမှတျချေါဆိုကွပွီး မွတျစှာဘုရားအား ပနျး၊ ဆီမီး၊ ရခေမျြးတို့ဖွငျ့ ကပျလှူပူဇျောကွတဲ့ ဓလေ့ ထုံးစံ ရှိပါတယျ။
အမရေိကနျ ရိုးရာမှာတော့ ဒီလမငျးကွီးကို မုဆိုးလမငျး “Full Hunter’s Moon” လို့ ချေါကွပါတယျ။ ဆောငျးဦးရှကျကွှခြေိနျဖွဈလို့ ကွှလှေငျ့လာသော သဈရှကျမြားနှငျ့အတူ သားကောငျရရှိနိုငျသော (တနညျး) အမဲလိုကျရနျကောငျးသော အခြိနျ ဖွဈခို့ပါပဲ။
Full Traveller Moon (ခရီးသှားလ)၊ Blood Moon (ငှေးရောငျလှမျးသောလ) လို့လညျး ချေါကွပါတယျ။ သီတငျးကြှတျလပွညျ့နေ့ ညမှာ လမငျးရှိနမေယျ့ ကွယျတာရာကတော့ Cetus လို့ချေါတဲ့ ရေ နဂါး ကွယျတာရာပဲ ဖွဈပါတော့တယျ..။
ခရကျဒဈ စိတျမဆိုး တိုငျးရငျးဆေး Sein Same
ထူးခြားတဲ့ မော်ကျွန်းမြို့ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့ နွားသတ်ခွင့်မရှိတဲ့မြို့
အမဲလိုင်စင်ကို မြို့နေလူတွေက ငွေစုပြီး နှစ်တိုင်း လေလံနိုင်အောင်ဆွဲပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ သတ်ခွင့်မပေးပဲ သိမ်းထားတာ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ အမဲပေါ်လို့ သတင်းပေးရင် သတင်းပေးတဲ့သူကို ဆုငွေပါပေးတယ်တဲ့။
နှစ်ပတ်လည် အာရုံဆွမ်းလောင်းတဲ့မြို့ မြို့မှာရှိတဲ့ တောဈေးတန်း (ဟင်းသီးဟင်းရွက်တန်း) ဟင်းချက်စရာတွေရောင်းတဲ့ ဈေးတန်း ၃ခု ၄ခုလောက်မှာမှ မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ တောဈေးတန်းမှာ အလှူခံမဏ္ဍက နှစ်ပတ်လည်ရှိပါတယ်။
သူ့ရက်နဲ့သူ အလှူခံရတဲ့ငွေကို နောက်အပတ် အဲ့ဒီရက်မှာ အာရုံဆွမ်းချက်လောင်းပါတယ်။ အလှူခံမဏ္ဍက တနေရာထဲ။ ဆွမ်းချက်တဲ့နေရာကလည်း တခုထဲပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဖွဲ့ ရဖွဲ့။
မနက် ၄နာရီလောက်ဆို မြို့ပေါ်ကျောင်းပေါင်း ၄ဝကျော်က သံဃာတွေက မြို့ပတ်ပြီး ဆွမ်းတန်းကြီးတွေက ဟိုဖက်ကလာလိုက် ဒီဖက်ကလာလိုက်နဲ့ ထွက်လာကြတာ တကယ့်ကို ပီတိဖြစ်စရာပါ။
ဆွမ်းတန်း ၂တန်းမျက်နှာခြင်းဆိုင်လည်း သူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူ ဖြတ်နေကြတာပဲလေ။ အဲ့ဒါက မော်ကျွန်းမြို့လေးကို ကပ်ဆိုးတွေမကျရောက်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းထင်တာပဲနော်။
အင်္ဂလိပ်ခေတ်က စနစ်တကျမြို့တည်ခဲ့တယ်လို့ ပြောကြတာပဲလေ။ ဝလမ်းကနေ ၁၅လမ်းထိ အရှေ့နဲ့အနောက် A B C D လမ်း တောင်နဲ့မြောက်တန်းနေတဲ့မြို့ပေါ့။ အခုတော့ မြို့ချဲ့လာတာ မြို့ထိပ်တခု တခုရောက်ဖို့ မနည်းသွားနေရတယ်။
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ ကျော် (1)ရက်တိုင်း တာဝတိံသာဘုရားဆင်းပွဲ ရှိတယ်။ အခု သီတင်းကျွတ်ဆို 88ကြိမ်မြောက်ပေါ့။ မော်ကျွန်းသူ မော်ကျွန်းသားတိုင်း ဘုရားဆင်းပွဲ ကိုပြန်ချင်ကြတယ်လေ။
ဘယ်လောက်စည် ကားသလဲဆို မီးတောင်တွေလည်း ဖောက်ပြတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ လက်ဝဲရံ ရှင်မဟာမောက္ကလန် မဟာထေရ်က မီးတောင်ထဲကနေ လေထဲမှာ ဈန်ပျံသွားပြီး မြတ်စွာဘုရားကို နတ်ပြည်ကနေ ပြန်သွားပင့်ပုံကို Steelကြိုး ရစ်လုံးအကူနဲ့ပေါ့။ ဈာန်ပျံပြတာလေ။
ပြီး နတ်ပြည်အထပ်ထပ် တထပ်တိုင်းမှာ အသီအဆို အကတွေနဲ့ နတ်သား နတ်သမီးတွေနဲ့ ခြံရံပြီး လူ့ပြည်ကို ပြန်ဆင်းလာပါတယ်။ နောက်ရက် တမြို့လှည့် အပူဇော်ခံပါတယ်။ တာဝတိန်သာမြတ်စွာဘုရားက တရုပ်ကပြားဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းကြီးက တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဘုရားကြီးပါ။
မော်ကျွန်းအပိုင်ရွာသူကြီး 108ဦးပိုင် နှင့် အနီးအနားမြို့များမှ အကုန်လာကြသည်။ မြို့ထဲမှာ ညနေ၆နာရီ ကျော်လာတာနဲ့ လမ်းတွေမှာလူတွေအပြည့် ရာဇူဒိုင်မြစ် နဲ့ တုံးလှဲချောင်း ထဲလှေသင်္ဘော ဆိုက်စရာမကျန်အောင်ပြည့်နေတာ လမ်းတွေ မှာ လမ်း လျှောက်စရာမလိုပဲလူအုပ်ထဲညပ်ပြီးရွေ့နေတာပါ။
တာဝတိံသာကနေ မြတ်စွာဘုရားပြန်ဆင်းတဲ့နေ့မှာပဲ ကရင်ရွာလေးဖြစ်တဲ့ မရမ်းချောင်ရွာလေးမှာ မြစ်ထဲလှေတွေလှော်ရင်း ရေပက်ပွဲကလည်း အလွန်ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ရိုးသားတဲ့ရွာကလှေတွေ နဲ့ speed boat တွေရောထွေးနေတာပါ။ ရိုးသားတဲ့ ရွာဓလေ့ ရွာသား သူတွေပါ။
၃။ ခြင်္သေ ၂ကောင်ဘုရား
1. အခမဲ့ အောက်စီဂျင်
2. အခမဲ့ သွေးလှူအဖွဲ့
3. အခမဲ့ ဆေးခန်း
4. အခမဲ့ လူနာတင်ယာဉ်
6. ဇိဝိတ သားသတ်လိုင် စင် အလှူ
7. အခမဲ့ စာသင်ကျောင်း
8. ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မီးသတ်အဖွဲ့
9.သက်ကြီးစောင့်ရှောက် ဘိုးဘွားရိပ်သာ (နောင်ရေးစိတ်အေးရအောင် မော်ကျွန်းမြို့မှာ ပြန်နေကြပါ)
အင်မတန်လှပတဲ့ ရေပတ်လည် မြစ်ကြီးများဝိုင်းရံထားတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းက ချစ်စဖွယ်မြို့ငယ်လေး။ ဖော်ရွှေပြီး တမြို့လုံက အမျိုးတွေလိုနေကြတဲ့မြို့လေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကပြောတာ။ အခုမဟုတ်တော့ဘူး။
ရန်ကုန်ကနေ နေခြင်းပြန်လည်ပတ်လို့ကောင်းတဲ့အကွာအဝေးပါ။ လှိုင်သာယာကနေ ၃နာရီမောင်းရမည် လမ်းကောင်းသည်။
သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ အကြောင်း
၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၅) ရက်နေ့ဟာ သီတင်းကျွတ်လပြည့် (အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့) ဖြစ်ပါတယ်။ လမင်းကြီးဟာ နေ နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် (ကမ္ဘာတဘက်ခြမ်း) မှာ နေအလင်းရောင် ကျရောက်မှုကြောင့် အပြည့်အဝ လင်းလက်လို့ နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
သီတင်းကျွတ်လကို ပုဂံခေတ်ကျောက်စာများမှာ “သန္တူလ (အသံထွက်- သန်တူလ)” လို့ ရေးသားကြပါတယ်။ “သန်” ဆိုသည်မှာ “ကောက်ပင်” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီး.. “တူ” ဆိုသည်မှာ “ထောင်မတ်သည်၊ ပေါက်ပွားသည်” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ကောက်ပင်များ ထောင်မတ်ပေါက်ပွားသောကာလ လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆို နိုင်ပါတယ်။ အင်းဝခေတ် စာပေများတွင် “သီတင်းကျွတ်” လို့ စတင် သုံးစွဲခဲကြပြီး “သီတင်း” ဆိုသည်မှာ “နေထိုင်ခြင်း” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ဝါတွင်း ၃ လ ကာလပါတ်လုံး သီတင်းသုံး နေထိုင်ခြင်းမှ ကျွတ်လွတ်သော အချိန်အခါ ဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီပန်းမှာ ကြာဖြူပန်း ( Nymphaea Lotus ) ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်ကတော့.. မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ ဝါတွင်း (၃) လ လုံး တာဝတိံသာ နတ်ပြည်မှာ မယ်တော် သန္တုဿိ နတ်သားအပါအဝင် နတ်၊ ဗြဟ္မာတို့အား အဘိဓမ္မာတရား ဟောကြားပြီး လူ့ပြည်သို့ ပြန်လည် ဆင်းသက်သော အချိန်အခါ ဖြစ်သောကြောင့် “အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့” လို့ သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုကြပြီး မြတ်စွာဘုရားအား ပန်း၊ ဆီမီး၊ ရေချမ်းတို့ဖြင့် ကပ်လှူပူဇော်ကြတဲ့ ဓလေ့ ထုံးစံ ရှိပါတယ်။
အမေရိကန် ရိုးရာမှာတော့ ဒီလမင်းကြီးကို မုဆိုးလမင်း “Full Hunter’s Moon” လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ ဆောင်းဦးရွက်ကြွေချိန်ဖြစ်လို့ ကြွေလွင့်လာသော သစ်ရွက်များနှင့်အတူ သားကောင်ရရှိနိုင်သော (တနည်း) အမဲလိုက်ရန်ကောင်းသော အချိန် ဖြစ်ခို့ပါပဲ။
Full Traveller Moon (ခရီးသွားလ)၊ Blood Moon (ငွေးရောင်လွှမ်းသောလ) လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ ညမှာ လမင်းရှိနေမယ့် ကြယ်တာရာကတော့ Cetus လို့ခေါ်တဲ့ ရေ နဂါး ကြယ်တာရာပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်..။
ခရက်ဒစ် စိတ်မဆိုး တိုင်းရင်းဆေး Sein Same
ဖခငျကွီးကိုရှကျရှံ့ခွငျးမရှိဘဲပွုစုစောငျ့ရှောကျနလေို့ ( ၃ ) နိုငျငံထိနာမညျကွီးနတေဲ့မိနျးမခြောလေး